10 sano oo sawiraya maktabadaha ugu quruxda badan meeraha | Abuurista khadka tooska ah
Sawir qaadahaan ayaa 10 sano ku qaatay sawirada maktabadaha ugu quruxda badan aduunka
Ayaamahan markay wararka waxaa ka buuxa dhacdooyin, isboorti iyo siyaasad, in ka badan wararka kale ee caalamiga ah, dhaqanku wuxuu umuuqdaa inuu u daayay inay ku sii nagaadaan asalka, markii ay aad muhiim u tahay in la dhiso fikradaha, caadooyinka iyo aadanaha.
Waa inaan dib ugu noqonaa warbaahinta kale si aan u helno sawir qaade fikirka fiican lahaa soo qaado maktabadaha ugu quruxda badan sawirradaada adduunka oo dhan. Meelahaas uu qofku wax ka akhriyi karo si aan xad lahayn illaa uu ka maareeyo inuu kor ugu qaado aqoontiisa heerarka aan la heli karin maalinta ugu horreysa ee uu buug ku qaatay gacantiisa.
Sawir qaadaha Reinhard Görner wuxuu ka shaqeynayay qaybta dhismaha ilaa 1982, labadaba waxa noqon lahaa qaab dhismeed casri ah iyo mid taariikhi ah. Waxay ahayd maalmahaas, markii uu casharrada sawir qaadashada ka qaadanayay jaamacadda, in uu bilaabay inuu xiisaynayo sawirrada noocyada dhismaha oo dhan.
Waxay ahayd uun markii uu ka horreeyay Julius Shulman oo akhrinaya taas Waxyi ayaa u yimid isaga oo wata buugiisa Architectural Photography. Waxay ka soo wareegtay in ka badan 40 sano oo uu magac ku yeeshay arimahan, isagoo ku soo bandhigaya shaqadiisa bandhigyo kala duwan iyo nooc kasta oo warbaahin ah.
Waa taxanihiisa uu sida caadiga ah u shaqeeyo muuji xariifnimada iyo quruxda dhismaha ee ku jirta faylalka in uu ku haysto maktabadaha oo ay bilaabeen 2008. Waxa uu kamaradiisa gacanta ku hayaa si uu u qabsado meelahaas waxbarasho ee uu awoodayo in uu ku muujiyo noocyada kala duwan ee qaabdhismeedka gudaha mid kasta oo ka mid ah.
Wadar ahaan wuxuu sawiray in kabadan 50 maktabado aan caadi aheyn oo muujinaya iskumid Maxay noqon kartaa hypnotizing iyo maxay tahay faa'iido darrada qaar ka mid ah iyaga oo leh shelfyadaas kor u kaca ku dhowaad dhammaad ka hor inta aan la eegin raadiyaha aan joogtada ahayn ee akhriska cusub; sida ku dhacda fannaankan oo isna isku si u doonaya, inkasta oo laga soo qaatay farshaxankii qaybo dahab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sawir qaadahaan ayaa 10 sano ku qaatay sawirada maktabadaha ugu quruxda badan aduunka
U beddel qoraalka xargaha si looga fogaado khaladaadka daabacaadda
Adobe Cloak, ama sida looga saaro walxaha aan loo baahnayn fiidiyow kasta